Haween iyaga oo aan ka warqabin dhalmada laga xiray | Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»Haween iyaga oo aan ka warqabin dhalmada laga xiray
Haween iyaga oo aan ka warqabin dhalmada laga xiray
Aayaha editor Send an email January 28, 2019
“Markii ay gabadheyda jirtay 12 sano ,waxay i waydiin jirtay sababta aysan gabadh ama wiil walaalo ah u lahayn”,.
Balse waxa aan xaqiiqada waxa igu dhacay u sheegay markii ay 33 jirtay “, waxaa sidaasi sheegtay Jean Whitehorse.
“Waa ay ku xumaatay markii ay ogaatay waxa ku dhacay hooyadeed “
Jean waxay ka soo jeedaa qowmiyada Navajo – waxaa goobta ay ku nooshahay ay ku taallaaMareykanka gaar ahaan Arizona, Utah iyo New Mexico.
Dadka halkaasi ku nool waxa ay ka soo jeedaan qowmiyadda Navajo – oo ah mid ka mid ah qowmiyadaha asal ahaan Mareykanka loogu yimid.
“Waxay iga qaateen dhammaan caruurteydii aan dhalay,marka aan arko qoys caruur yaryar sita waxa aan mar walba is dhahaa haddii aad haysan lahayd caruur.”ayay tiri Jean Whitehorse.
Kala fogeynta caruurta
Jean Whitehorse waxay ka mid ahayd kumannaan dhibanayaal u noqday barnaamij ay dowladda Mareykanka fulisay oo caruurta lagu kala fogaynayay.
Mar ay la hadashay BBC ayaa waxay nala wadaagtay xanuunka,carada iyo ceebta ay dareemayso.
Sanadii 1969, Jean waxay ku noolayd Oakland markaasi oo ay dareentay uurka gabadheeda.
Markii ay aaday xaruntii caafimaad ayaa waxay waydiiyeen in ay leedahay ceymis caafimaad markii ay maya dhahday ayaa waxa ay soo saareen dikumiintiyo.
“Waxa ay yiraahdeen haddii aad warqadahan saxiixdo waxa aad helaysaa dammaanaqaad ku saabsan qarashaadka caafimaadka, waxa aan waydiiyay waxa ay ula jeedaan? waxa ay ii sheegeen in gabadhayda la siinayo qof korsada islamarkana dadkaasi ay bixin doonaan qarashka caafimaadka,waan ka diiday waana isaga tagay .” ayay tiri.
“Waa cunugeyga ,ma doonayo in aan qof kale siiyo ” ayay intaa ku dartay.
Iyada oo aan raali ka ahayn
Jean waxa ay dib ugu laabatay qowmiyadeeda Navajo oo ku nool New Mexico si ay halkaasi ugu soo umusho gabadheeda.
Bilooyiin ka dib markii ay umushay waxay dareentay calool xanuun saa’id ah waxa ayna aaday isbitaal.
“Waxa ay ii sheegeen in la iga hayo uur ku jirta waxaana la ii qaaday isbataal kale”.
Waxaa laga codsaday in ay saxiixdo dhowr warqadood oo ay u malaynaysay in ay yihiin kuwa loo baahan yahay ka hor qalliin lagu sameeyo.
“Waxa aan dareemayay xanuun daran,waxa ay igu dhaheen ilaa aan warqadhaasi saxiixo in aan waxbo la ii qaban karin ,mid mid ayaana u saxiixay aniga oo aan iska aqrin.”ayay tiri
Waxaa xubno laga bixiyay uur ku jirta ,balse sanado ka dib markii ay xanuunsatay oo ay isbataalka dib ugu laabatay ayaa waxa ay dhakhaatiirta waydiiyeen warqadihii hore ee caafimaadka waxayna u sheegeen in dhalmada laga xiray.
“Waxa ay ii sheegeen in aan mar dambe caruur dhali doonin .”
Dhalma ka xiridda Jean ayaa dhacday xilli ay dowladda Mareykanka soo saartay barnaamij ilmaha lagu kala fogeynayo kaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka asal ahaan Mareykanka loogu yimid.
Waxa uu barnaamijkan ahaa mid ay ahayd in qofka daawooyiinka la siinayo laga helo ogolaanshiyo,balse waxaa markii dambe caddaatay in qaar badan oo ka mid ah haweenka dadka asal ahaan Mareykanka ka soo jeeda laga xiray dhalmada.
Waxaa sidoo kale la ogaaday in haweenkani aysan ka war hayn markii dhalmada laga xirayay.
Waxaa la soo saaray warbixin uu soo diyaariyay xafiiska isla xisaabtamidda dowladda mareykanka 1976 taasi oo lagu eegayay haweenka dhalmada laga xiray.
Waxaa baaritaanka laga sameeyay 4 ka mid ah 12 gobol ee laga fuliyay barnaamijkan dhalmada looga xirayay haweenka intii u dhaxaysay 1973 iyo 1976.
Gabagabadii ayaa waxaa la ogaaday in 3,406 ka mid ah la fuliyay iyada oo aysan haweenka ka warqabin.
Taasi waxa ay micnaheedu tahay in dadkani aan lagu wargalin in barnaamijku ahaa mid dhasha looga xirayo.
Taariikh ahaan dadka asal ahaan loogu yimid Mareykanka ayaa waxa ay la kulmeen midibtakoor badan islamarkana cawaaqibkii ka dhashay ayaa ah mid wali la dareemayo.
Sida ku cad warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay 2010 dadka asal ahaan Amerikanka ah ayaa 600 oo jeer halis ugu jira in uu ku dhaco cudurka qaaxada,halka 62% ay u dhawdahay in ay is dilaan.
6 Been Oo Gabar Aanan Sheegin Ay Adagtahay In La Helo
Xal loo helay dhibaato heysatay hooyooyinka Soomaalida ee Mareykanka
Isticmaalka shaashadda Telefoonka ama TV-ga oo waxyeelleyn kara ilmaha (Daraasad)
Dowladda Federaalka oo xil u magacaawday Fanaanka Nimcaan Hillaac (Akhriso)
Hooyo dalbatay in ay wiilkeeda aragto ka hor inta aysan dhiman (Daawo Sawirro)
3 QAAB OO FUDUD OO LACAG LAGU SAMEEYO [GUUSHA GANACSIGA)
Why your boyfriend doesn’t find you attractive anymore
16 Waxyaabood Oo Aad Sameyso Oo Burburiya Xiriirkaaga (Iska Ilaali)
UGAAR AH DUMARKA: 6 Calaamadood uu lasoo baxo ninka marka uu ku naco
7 Nooc Oo Haweenka Kamid Ah Oo Halis Gelin Kara Naftaada (Iska Ilaali)
Qodobka ugu danbeeya ayaan daremaa ani...
Qodobka ugu danbeeya ayaan dareemaa ani qalbigayga cidna kum...
Manshaa allaah waa fikir iga maqnaa...
Istahil ismacil yusuf
Thanks your prepare...
Wan ka helay page kaan runtiii...